မင်္ဂလာ မွေးနေ့ပါ ကိုကျော်သူ | ဒီရေ
မင်္ဂလာ မွေးနေ့ပါ ကိုကျော်သူ
၇၀ ကျော် သေခါနီးပေမဲ့ မိုက်နေတဲ့ လူတွေရှိတယ်။
ပညာတွေတတ်တိုင်း… လူပီသတာ မဟုတ်ဘူး..
အာဏာရှင် အကြိုက် ခွေးလို အူနေသူတွေ ရှိတယ်..
စိန်တွေ ၀တ်နိုင်တိုင်း.. လူချီးမွမ်းတာ မဟုတ်ဘူး..
လူပေါင်းသန်းချီ.. အဖေကို ဆဲနေတာ နားထောင်ရဲတဲ့ သမီးတွေရှိတယ်…
ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီ.. ရတိုင်း ပြည်သူ ချစ်သော အနူပညာသည် မမည်ဘူး
သရုပ်မပီ..ပေမမှီ… အဖားကောင်း ရသူတွေလည်းရှိတယ်။
၀င်လာချိန် နတ္တိ.. ထွက်သွားချိန် နတ္တိ..
ကျန်ခဲ့ သမိုင်းသာ.. မှတ်ကျောက်ဖြစ်၏။
သင်၏ သမိုင်းသည် ဖြူစင် အတိ..
၀မ်းမြောက် သာဓု ခေါ်ပါ၏။
သင်သည်.. တုနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာရှင်.
အနူပညာသည်… သင် သရုပ်ဆောင်မှ မဟုတ်…
အနုပညာသည် သင် ဒါရိုက်တာလုပ်မှ မဟုတ်
အနုပညာသည် သင် ကဗျာရေးမှ မဟုတ်
အနုပညာသည် သင် ပန်းချီဆွဲ မှ မဟုတ်
ပြောချင်သူ ပြောပစေ.. ကျော်သူ စဏ္ဍာလ..
ကဲ့ရဲ့ချင်သူ ကဲ့ရဲ့ပစေ.. ကျော်သူ လူမိုက်.
မခေါ်မပြောနေပစေ .. မှန်ရာကို ဦးစိုက်..
နှလုံးသား စေရာသာလိုက် သူငယ်ချင်း..
လူကောင်းသတင်း.. လူလူချင်းဘဲ သိတယ်။
လူမိုက်ကဲ့ရဲ့.. မှုစရာ မဟုတ်ဘူး။
အသက် (၅၁).. သင်ဘ၀ လူဖြစ် ကျိူးနပ်ခဲ့ပြီ…
အကျဉ်းချချင်ချ.. အသက်သတ်သော် မရ.
စံတုနှိုင်းမရ ရှင်သန့် အသက်ဝင်..
သင်၏ သင်္ချိုင်း.. ပန်းပွင့်များ ဝေလေမည်။
သင်၏ ကုသိုလ်… နတ်လူ သာဓု ခေါ်တော့သည်။
သင်၏ ဇနီး.. သင့်အတွက် ပီတိ လွှမ်းတော့သည်။
ဖြစ်လေရာ ဘုံဘ၀.. ကံသာလျှင် သင့်၏ နောက်လိုက် ဖြစ်တော့သည်။
စေတနာရှင်.. အနုပညာရှင် ကိုကျော်သူ၏ ၅၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ သို့ ..
ဂုဏ်ယူပါတယ် သူငယ်ချင်း.. မင်း၏ တုနှိုင်း မရ ဂရုဏာ.. စေတနာ နှင့် မေတ္တာ